Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Mobile na Nlele, Ihe Mmụta Kachasị Mma Site n'aka Ndị Ọrụ | Martech Zone
Afọ iri na ekwentị ejirila nke ọma. Ihe data gosiri na site n’afọ 2018, a ga-enwe ndị ọrụ ekwentị ama ama dị nde abụọ na nde atọ na atọ n ’ụwa niile. The nkezi ọrụ nwere ngwa 27 na ngwaọrụ ha.
Kedu ka azụmaahịa si eme mkpọtụ mgbe asọmpi karịrị akarị? Azịza ya dị na usoro data na-eduga na ahịa ngwa na ịghọta ihe mmụta sitere n'aka ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na-egbu ya n'ọhịa ha.
Ngalaba na-egwu egwu, ugbu a ahịa ekwentị na-eto eto na-edekọ ihe ịga nke ọma dị egwu. N'ihi ọganihu na mkpuchi na ndozi na mkpanaka njikọ, nyocha data, UX na ahịa mkpanaka, Ego n ’gaminggba Cha Cha zuru ụwa ọnụ kụrụ ijeri $ 91 na njedebe nke 2016. Ndị na-egwu egwuregwu maara na nnweta dị mkpa, mana mmefu ego azụmaahịa ka eji nke ọma na mkpọsa njigide na mkpanaka. Ha na-enye ego karịa maka ego gị. Ihe omuma anyi banyere iGaming Insights gosiputara ufodu uzo esi eme ka ndi mmadu jide na mobile.
Budata nke gị Ebe a
Companieslọ ọrụ na-egwu egwuregwu na-elekwasị anya na ụdị nnweta mkpanaka akọwapụtara, njem ndị ahịa dị ike, na-ebute dabere na ọrụ ọkpụkpọ na akpaaka nke usoro ndị ahụ. Tinggba nzọ na ndị na-egwu egwuregwu maara naanị maka iji ọwa kachasị mma maka ndị egwuregwu ha n'oge nnabata ha. Site na ngwa ka ịkwanye ọkwa, ihe na-ebute onye ọ bụla, ndị na-arụ ọrụ iGaming na-emeri agha mkpanaka.
Na Element Wave anyị na ụfọdụ n'ime nnukwu ịkụ nzọ na ndị na-egwu egwuregwu na Europe na-arụ ọrụ. Anyị ezifela ozi ijeri ọkara ijeri ma nyochaa ọtụtụ ngwa ngwa. Ntuziaka iGaming Insights anyị dị na n'efu maka ndị na-ere ahịa mkpanaka iji mụta ihe.
Ntuziaka iGaming Insights ekwentị
Ntuziaka ahụ na-eleba anya na ezigbo oge na omume ọkpụkpọ egwuregwu na ngwa. Datazọ eji achọ data maka ịme ihe n'otu n'otu dabere na omume onye ọkpụkpọ na-eweta ahụmịhe mkpanaka.
Akụkọ anyị na-elekwasị anya na nsonaazụ sitere na ọtụtụ puku ozi ngwa ngwa, ịkwanye ọkwa na omume ọkpụkpọ gafee akwụkwọ egwuregwu na ngwa cha cha.
Ihe data a na egosiputa usoro doro anya na nsonaazụ nwere ike ihu na njem ndebanye aha. Mgbe ụfọdụ usoro ndebanye aha na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ gbagwojuru anya. O nwere ike isiri ndị egwuregwu ike ịmecha. Akụkọ anyị depụtara ọnụọgụ ndị egwuregwu gụchara ndebanye aha ha ma mechaa jupụta, yana atụmatụ iji gbochie ya.
Ọrụ ndị egwu na ọnụego ịkwụ ụgwọ na-enye akara ngosi doro anya nke ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke mbọ ahịa ahịa mkpanaka. Mara mgbe ndị ọrụ gị kwụsịrị na ebe usoro a na-enyere aka ịhazigharị usoro gị iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Ozugbo bụ ọlaọcha mgbo maka iGaming na anyị na-agwa na ọ bụ naanị ihe gbasara oge, tupu ọ bụrụ ọkọlọtọ maka vetikal niile. Ihe na-akpali akpali na-adabere na ihe onye ọrụ na-eme ugbu a, izipu ozi ozugbo na nyocha nke oge na-eduga n'ịbawanye ntinye na njigide. Dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nyocha nke abụọ, enwere njikọ dị n'etiti ịkụ nzọ na ndị na-egwu egwuregwu na ngwa ekele maka ezigbo oge nke egwuregwu. Enwere ike ikwu otu ihe n'ofe niile.
Mgbanwe nke smartphones pụtara na ndị ọrụ iGaming nwere ọtụtụ mgbanwe ha ga-eme. Ebe otu egwuregwu gara na bookies, ugbu a, ha nwere ike nzọ site na nkasi obi nke oche oche, na mmanya na-ekiri egwuregwu, mgbe ha na-aga ma ọ bụ ọbụna na ime ụlọ ịwụ! Obosara nke data dị ugbu a na-afụ ụfụ: site na ọnọdụ, asụsụ na ọkwa ngwaọrụ, na ịkụ nzọ akụkọ ihe mere eme, iji mmemme ngwa, yana mmasị ịgba chaa chaa. Usoro data a na itinye data a na-enye ndị ọrụ iGaming ikike karịa ọtụtụ azụmaahịa na ntanetị ndị ọzọ.
Banyere Element Wave
Mmewere Wave na - ewulite ngwa ngwa azụmaahịa maka ịkụ nzọ egwuregwu, iji mụbaa azụmahịa azụmahịa na-aga site na 10X. Dabere na Galway, Ireland Element Wave na-enye teknụzụ ọgbọ ọhụụ na ndị ọkachamara na-elekọta ọrụ ịkụ nzọ na ụlọ ọrụ egwuregwu.
Tags: ngwa cha chana -agammewere ifeelementwaveịgba chaa chaagamegamersegwuregwuỊgba Cha Chaebeozicha cha cha chaegwuregwu ekwentịegwuregwu mkpanakangwa egwuregwu eji egwu egwuihe omimi nke mobaịlụNtuziaka igaming nke igamingozi ntanetionline ịgba chaa chaaplayerozugboịgba chaa chaa egwuregwuegwuregwu ịgba chaa chaa ngwa